कुकुर चित्रहरू निर्माण गरिनुको छ वास्तविक बौंसरमा विश्वासयोग्य हुन
कुकिजलाई अनुमति दिनु भएकोमा धन्यवाद
डेविड ब्रिडबर्ग - पोस्ट आधुनिक ग्यालरी
अनौंठो कला कला अनुभवहरू
मेरो कला ब्लग
पसल प्रिन्ट गर्नुहोस्
विशेषज्ञहरु लाई कुकुर चित्रहरु शुरुवात गर्ने
डेभिडब्रिडबर्ग सेप्टेम्बर 2, 2020 मार्च 23, 2021
4 पागल कुकुर चित्रहरु? हैन, फिडो मा माध्यम आज हामी प्रेम गर्दछौं
हामी किन नयाँ माध्यमहरू प्रयोग गरेर मिसिएका छौं? खैर, त्यो स्पष्ट छैन। तपाईले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नु पर्छ। यहाँ मसँग डिजिटल फोटो, मूर्तिकला, र मेरो आफ्नै कार्यको दुई डिजिटल टुक्राको रूपमा केहि कार्यहरू छन्।
यी धेरै खुसी कुकुर छविहरू हुन्। हाम्रो कोविड १ world संसारबाट कलात्मक राहत।
म केवल तल आफ्नो पोस्टर र क्यानभास प्रिन्टको रूपमा आफ्नो कलाकृति बेच्छु।
इन्स्टाग्राम हामी मध्येका कुनै पनि ह्याकरहरूको लागि हो। प्रस्तुति एक धेरै राम्रो पेशेवर लुक हो। सबै जना तपाइँको पाल्तु जनावर छविहरू चाहन्छन्। शुरुवातकर्ता वा विशेषज्ञ तपाईंको कुकुर छवि नियम।
ताकाशी मुरकामीले १ 1970 s० को दशकको फूलहरू आफ्नो खुशीको रूपमा अनुहारको साथ प्रयोग गर्दछन्। उत्साहजनक कुरा गर्नुहोस्। तपाईं कलाकारको पोमको कुकुरको सडक छविहरूबाट उसले गरेको कार्यको पहिचान गर्न सक्नुहुन्न। ताकाशीको इन्स्टाग्राम फिड यस धनुषका धेरै छन् (शाब्दिक रूपमा क्रस जात छैन)।
ताकाशी मुरकामीसँग खुशी देख्ने चाखलाग्दो तरीका छ। एक धेरै व्यक्तिगत आवश्यकता वा अन्य चित्रित गर्न को लागी इच्छा गर्न को लागी अन्य सम्बन्धित हुन र रमाउन सक्नुहुन्छ।
जीवन भन्दा ठूलो
जेफ कोन्स सम्भवत सबैभन्दा राम्रो जीवन्त कलाकार हुन सक्छ। यदि तपाईंले उहाँको बारेमा सुन्नु भएको छैन भने, म तपाईंलाई परिचय दिन्छु। बेलुन कुकुर (रातो) २० फिटको मूर्ति हो। कोन्सले तपाइँको व्यावसायिक प्रवृत्तिलाई पुरस्कृत गर्दछ। अब केहि को लागी उनको काम उपहास। जेफ एक इको चेम्बर हो जुन सँधै आफ्नो थिमहरुमा फराकिलो हुन्छ। कलाकारहरूको सबैभन्दा संग्रहणीय मानिन्छ (जुन तपाईंको वालेटमा निर्भर गर्दछ), उहाँको काम फाइन आर्ट वर्ल्ड भर सार्वजनिक प्रदर्शनमा छ।
जेफ कोन्स द्वारा बेलुन कुकुर रातो
जेफको बलून डग (सुन्तला) २०१ 2013 को गिरावटमा $$..58.4 मिलियन डलरमा बिक्री भयो। रेकर्ड सेट गर्दै त्यस समयमा जीवित कलाकारको लागि। कूनसको कारखानाका कथाहरू, कलाकार आफैं, र उनको काम, पौराणिक छन्।
ताकाशी मुरकामी र जेफ कूनस छविहरू मेरो द्वारा बिक्रीको लागि होईन। तिनीहरूको नामको सीमित प्रयोग र दुई छविहरू उचित प्रयोगको अन्तर्गत पर्दछ।
कुकुर चित्रहरु डिजिटल
के तपाईं डिजिटल उपकरण चित्रकला को मेरो उपयोग मा विचार गर्नुहुन्छ? म प्युरिस्ट होइन। पक्कै पनि यो डु the्गालाई रक गर्नको लागि होइन। साँच्चै मेरो पेटले मलाई तपाईं संग अग्रिम हुन भन्छ। मलाई कुकुरहरू मन पर्छ, र मैले मेरा उपकरणहरू फिडोमा लागू गर्नुपर्‍यो।
फिडो ल्याटिनबाट आएको छ "विश्वास गर्न वा विश्वास गर्न"। निश्चित रूपमा यदि तपाईं आफ्नो पिल्लालाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं कसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ?
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा संगीत नोट।
यदि तपाईं कुकुरहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले यो ब्लग पोष्टमा ट्युन गर्नुभयो, तपाईंलाई प्रयोगशाला मनपर्‍यो। मैले उसको आँखामा ठूलो ध्यान दिएँ। तपाई अझ राम्रो दृश्यका लागि छविमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं या त Rottweiler व्यक्ति हो वा तपाईं हुनुहुन्न। तपाईलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक छैन, वा तपाईलाई विश्वास गर्ने कुनै तरिका छैन। म यी मुटुको लागि मेरो मुटु मा एक नरम दाग छ। यसमा फेरि आँखा होशियारी गरियो। यो जनावर तीखा र स्पष्ट छ, धेरै आत्मविश्वास, एक खेलाडी।
अब यो तपाइँलाई फरक हुन सक्छ, म आफ्नो पशु छविहरू मेरो मा राख्छु समकालीन संग्रह पोस्ट गर्नुहोस्। संग्रह मेरो समकालीन संग्रह पछि विकसित भयो, विषय वस्तुको रूपमा परिभाषित भएपछि। जेफ कूनस बलून कुकुरहरूको बारेमा सोच्नुहोस्।
यो कसरी म संग्रह स introduce्केत गर्दछु:
“जीवन नोट जस्तै संगीत नोट छोटो छ। तपाईं मेरो पहिलेको समकालीन संग्रहमा देख्न सक्नुहुनेछ, म विषयहरूलाई वस्तुको रूपमा पुन: सिर्जना गर्दछु। यस संग्रहमा, पोस्ट समकालीन संग्रह, म फेरि जीवनमा वस्तुहरूमा मिलाउँछु। जनावरहरू अक्सर आपत्तिजनक हुन्छन् र मानविकीकरण हुन्छन् र तिनीहरूलाई उत्तम विषय बनाउँछन्। ”
डेभिड ब्रिडबर्ग, ब्लग लेखक
फिडोमा आधुनिक सम्बन्ध त्यहाँ कतै छ। कुखुरा जंगली भन्दा तपाईंको घरमा धेरै लामो बाँच्न सक्छ। हामी पिप्सलाई माया गर्छौं।
परिशिष्ट: क्यानाइन, वुल्फ, फक्स, र Rotweiler
दुई व्यक्तिलाई धन्यबाद दिनुहोस् जो मेरो कलाकृति जान्दछन्। दुबैले यो लेख पढिरहेको छ भनिएको छ, थप जानकारी जोड्नुहोस् र तपाईंको अन्य केना छविहरू थप्न। आमाले जिद्दी गरिरहनु भएको छ कि मसंग मेरो पाठकहरु लाई अधिक प्रस्ताव छ। एक कलेक्टरले मलाई उनले लेख्यो कि उनले ब्वाँसोको प्रिन्ट देख्दैन थिए जसको उसको चर्चा छ।
धेरै प्रोत्साहित महसुस गर्दै, मँ यो पोस्ट अपडेट गर्न फिर्ता आएको छु। म मेरो साधारण निष्कर्ष अपरिवर्तित अन्त्यमा छोड्छु।
ब्वाँसो हाम्रो पहिलो कुखुरा हो
तपाइँ शायद ब्वाँसो छवि को यी दुई संस्करणहरु मा रुचि। प्रविधि एक अद्वितीय दृष्टिकोण हो। म मेरो सानो व्यापार गोप्य दिन सक्दिन।
यस छविको पहिलो राज्य उज्ज्वल र प्रकाश छ।
उहाँ एक सुन्दर देखिने ब्वाँसो हुनुहुन्छ। तपाईं उसको चरित्र देख्न सक्नुहुन्छ, खुशीसाथ उसको वातावरणमा केहि चीज गर्न अभिप्राय। भित्र कुकुर छ। नाक र कान जस्तै।
तपाईंको प्रतिक्रियाहरू यी दुई छविहरूको बिच विभाजित छन्। सेतो अन्तरिक्षमा कलात्मक रूपमा छोड्नु रोचक छ। छविको संरचना त्यो बलियो छ।
दोस्रो संस्करणको लागि आवाश्यकता थियो किनभने एक रसीला फर ब्वाँसोको विशेषता हो।
थपिएको र inमा एकल परिवर्तनले शिकारमा ब्वाँसो सिर्जना गर्दछ। ऊ ठिकै कुरामा केही गर्न इच्छुक छ। एउटा कुकुर जसरी गिलहरीको पछाडि जान्छ।
एक एक्लो फक्स
स्वतन्त्रता पाउँदा, मैले मेरो फ्याक्समा रंगहरूको वर्गीकरण थपेको छ। तपाईंलाई यो मनपर्न सक्छ। हेजको माध्यमबाट दौडिरहेको फ्याक्स यस्तो दृश्य हो जुन हामी मानिसहरूले अनुभव गर्दछौं। प्राकृतिक स्वतन्त्रताको चमक।
स्यालको यो छविको बारेमा के मनमोहक छ? तपाईं देख्नुहुनेछ, यदि मैले यो भनेको हुँ।
तपाईंको छिमेकमा स्यालले तपाईंलाई कहिल्यै नजिक हुन दिदैन। यदि तपाईं हामी सबै जस्तै हुनुहुन्छ। यो नजिकको कारण यसको एक गहनता छ। तपाईं प्रकृतिको अंश बन्नुहुन्छ।
मेरो फ्याक्सले धेरै व्यक्तिहरूबाट धेरै न्यानो प्रतिक्रिया पाएको छ। कलाकारको रूपमा, म त्यो ठूलो सौदा को सराहना गर्छु। हामी कलाकारहरू कहिलेकाँही ना bare्गो हुन्छौं।
Rottweiler एक धेरै विशेष जात हो
बीस बर्ष अघि, एक प्यारा पुरानो साथीले मलाई उनको रोट्टवेलरसँग परिचय गरायो। उसको नाम पोर्की थियो। एक ठूलो पुरुष रोट्टी, पोर्की एक उद्धार कुकुर थियो। मेरो साथी कुकुरको कुकुर थियो। कनेक्टिकटका राज्यले उनको जीवन बचाएर उनलाई उनीसँगै राखेका थिए।
उनलाई भेट्टाएपछि पोर्की एकदम रिसाएकी थिइन। ऊ एकदम नराम्रोसँग दुर्व्यवहार गरिएको थियो। पहिलो हप्ता उनको घरमा, उनले एक आपसी मित्रलाई भनिन्, "म यो गर्न सक्दिन"। दोस्रो हप्ता, उनीसँग कुकुर जस्तो वफादार कहिल्यै थिएन।
उनी भन्छिन्, Rottweiler जस्तो कुकुर छैन। उसको जातको सबै काम छ। ऊ सबैभन्दा बहुमुखी कुकुर हो।
यो Rottweiler छवि को दोस्रो संस्करण हो।
जीवन यसको राम्रो समय र खराब छ। म तिमीलाई कसलाई भन्दछु? तपाई राम्ररी सचेत हुनुहुन्छ। पोर्की बित्यो, र मेरो घनिष्ठ मित्र दुई वर्ष पछि टुक्रिएको हृदय पारित। म त्यस समयमा शोकित भएको बेला, म मनमोहक सम्झनाहरू सहित फर्केर हेर्छु।
उसको प्राइममा, पोर्की मलाई थाहा छ सब भन्दा राम्रो खेलाडी मध्ये एक थियो। ती दुबै व्यक्तिको हृदय ठूलो थियो।
त्यो अन्तिम टिप्पणी मेरो लागि व्यक्तिगत निष्कर्ष हो। मैले यस अपडेटको साथ माथि भनेझैं म मूल निष्कर्ष परिवर्तन गर्दिन। "कुकुरहरू" बाट "क्यानिनहरू" मा नेतृत्व शब्द परिवर्तनको अपवादको साथ।
ललित कलाको विषयका रूपमा क्यानिनहरू सदाको लागि रहिरहेछन्। जबसम्म हामी वरपर छौं। नयाँ प्रविधिको कायाकल्प।
मेरो वेबसाइटमा छवि बिक्री पृष्ठ हेर्नको लागि तपाईंको कल्पनाको कुनै छविमा क्लिक गर्नुहोस् (मेरो कला मात्र, माथिको छवि ढाक्न लागू हुँदैन)।
प्रश्न: समकालीन कलाकारहरूले कुकुरहरूलाई कसरी प्रेम गर्छन्? मलाई तरिका गणना गर्नुहोस्। गम्भीरताका साथ, नयाँ माध्यमिकहरू चाखलाग्दो छन्।
अमेरिकाको राम्रो कला प्रेम गर्न: तीन उत्साहित विचारहरू
कसरी मेरो फूल चित्रकारी बनाउन को लागी सजिलो छ
गुगल, माईक्रोसफ्ट, फेसबुक र इंस्टाग्राम पसल र स्टोरहरू
शुरुआतीका लागि एब्स्ट्र्याक्ट कलाकारहरू कसरी हेर्ने
कसरी म सजीलो भिन्सेन्ट भान ग चित्रका साथ खेल्छु
भिन्सेन्ट भ्यान गो
अमेरिका को कला प्रेम गर्न
न्यू योर्क टाइम्स आर्ट सेक्शन
Van Gogh संग्रहालय
कला महानगरीय संग्रहालय
आधुनिक ग्यालरी फ्लोरल डिजाइन पोस्ट गर्नुहोस्
तह van भ्यान गोग
आधुनिक ग्यालरी समकालीन कला पोष्ट गर्नुहोस्
समकालीन Vers भर्स्प्रोन्क
आधुनिक ग्यालरी सार कला पोस्ट गर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © २०२० मेरो ब्लग, eStar your तपाईको कामका लागि धन्यवाद GretaThemes।